विश्वकप फिचर | Ratopati
कसले लैजाला 'गोल्डेन' बल, यी हुन् दाबेदार खेलाडी ? access_timeअसार ३०, २०७५
विश्वकपको फाइनल खेल सुरु हुन बाँकी नै रहेका बेला यस प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड कसले लैजाला भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छ । विश्वकप २०१८ सुरु हुँदा पोर्चुगलका क्रिस्ट्रियानो रोनाल्डो, अर्जेन्टिनाको लियोनल मेसी, ब्राजिलका नेइमार, जर्मनीका मेसुट ओजिल, उरुग्वेका ...
० टु १०० : आर्सनलबाट निकालिँदा, प्रिमियर लिगमा १ सय गोल गर्दा access_timeअसार २७, २०७५
ह्यारी केन जब हामी सानो हुन्छौँ, त्यतिबेला असफल हुँदा पनि रमाइलो लाग्छ । म त्यो दिन अझै पनि राम्रोसँग सम्झन्छु । हाम्रो घरपछाडि पार्र्क थियो जहाँ म सधैँ दाई र बुबासँग फटबल खेल्न जान्थेँ । न राम्रो मैदान थियो, न कहिल्यै गोल नै गर्थेँ । त्यहाँ दुईवटा रु...
जतिबेला म पेरिसमा कवाडी उठाउँथेँ access_timeअसार २६, २०७५
मलाई लाग्छ, मैले अझै उत्कृष्ट खेल्नुपर्छ । किनकि मेरा बाबुले हरेक खेल हेरिरहेका हुन्छन् । पश्चिम अफ्रिकी देश मालीबाट ८० को दशकमा युरोप छिर्दा मेरा अभिभावकले सहज जीवन पाउने आशा गरेका थिए । म र मेरी बहिनीको जन्म फ्रान्समा भयो । युरोपमा पनि सोचेजस्तो प्रगति भएन...
‘आमासँग होटलको ट्वाइलेट सफा गर्दा, आमाको लागि नयाँ घर किन्दा’ access_timeअसार २३, २०७५
राहिम स्टर्लिङ मेरी छोरी हल्का चकचके छे । जिद्दी छे । मेरी आमाले चेतावनी दिएकी थिइन् कि ऊ यस्तो हुनसक्छे । ६ वर्षको भएपछि उनको यस्तो व्यवहार सुरु भयो । उनको बाबुले भर्खरै म्यानचेस्टर सिटीबाट लिग जितेको थियो, लिगमा १ सय अंक प्राप्त गरेर । तर उसलाई यसको मतल...
‘त्यो कङ्गाल जिन्दगी, त्यो मुसा कुद्ने कोठा’ access_timeअसार २२, २०७५
रोमेलु लुकाकु मलाई अझै त्यो क्षण याद छ । जतिबेला हाम्रो परिवार कङ्गाल थियो । म अझै पनि रेफ्रिजरेटर नजिक बसिरहेकी मेरी आमा र उनको अनुहारलाई सम्झन्छु । म ६ वर्षका थिएँ र स्कूलमा ब्रेक भएपछि खाजाका लागि घर आएको थिएँ । मेरी आमाको मेन्युमा सधैँ एउटै परिकार...
खाली खुट्टे फुटबल र त्यो आइसक्रिम गोल access_timeअसार २१, २०७५
प्रिय, ९ वर्षका एडिन्सन काभानी म यो चिठ्ठी त्यस बालकलाई लेख्दैछु । जसलाई छिमेकमा सबैले ‘पेलाडो’ भनेर बोलाउँछन् । जब तिमी सानो थियौँ, त्यतिबेला लामो कपाल थिएन । बिस्तारै बढ्दै गयो । यसका विषयमा तिमीले केही गर्न सक्नेवाला थिएनौँ । तर ति...
सुआरेज वा रोनाल्डो, कसले जित्लान् ? access_timeअसार १६, २०७५
नेपाली समयअनुसार ११ बजेर ४५ मिनेटजाँदा सुरु हुने खेलमा आज दुई पटकको विश्वविजेता उरुग्वे र पोर्चुगलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यस खेल जित्ने टोलीले क्वार्टरफाइनलमा फ्रान्स र अर्जेन्टिनाबीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । आजको खेलको मुख्य आकर्षण नै क्रिष्ट्रियानो रोन...
अर्जेन्टिना र मेस्सी : लभ– हेटको सम्बन्ध access_timeअसार १२, २०७५
एजेन्सी । डियगो म्याराडोना भगवान् सरह पुजिन्छन् । मारियो केम्पस महान् खेलाडी हुन् । सेवास्टियन भेरोन, डियगो सिमोनी, बाटिस्टुटा, रोर्बटो आयला, हर्नान क्रेस्पो, रोर्बटो आयला, कार्लोस टेभेच, एन्जेल डि मारिया लगायतका खेलाडीहरु अर्जेन्टिनीका लागि आदर्श हुन् । जब मेस्सीको सवाल उठ्...
नयाँ रणनीति, नयाँ उरुग्वे access_timeअसार ११, २०७५
एजेन्सी । युवा परियोजनाबाट खेलाडी उत्पादन गर्दै उनीहरुलाई राष्ट्रिय टोलीसम्म स्थापित गर्ने उरुग्वेको नीति यतिबेला सफल भइरहेको छ । उदाहरणका लागि, इङल्यान्डलाई हेरे पुग्छ । अघिल्लो विश्वकपमा कुनै खेल नजिती समुहको पुछारमा रहेर बाहिरिएको इङ्ग्ल्यान्ड अहिले सुरुवा...
हात नलागेको विरासत : मेस्सी, रोनाल्डो र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभुत्वको युद्ध access_timeअसार ९, २०७५
१. विश्व फुटबलमा जगतमा उठ्ने विभिन्न प्रश्नहरुमध्ये एउटा प्रश्नले पछिल्लो समय फुटबल प्रेमीहरुलाई विभाजित गर्ने गरेको छ – के कुनै खेलाडीले महान खेलाडीको हैसियत पाउनको लागि आफ्नो क्लब र देश दुबैलाई प्रमुख उपाधीहरु दिलाउनु आवश्यक हुन्छ ? अथवा के घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय...
थरी–थरी फ्यान : कतै पीडा, कतै उत्सव (फोटोफिचर) access_timeअसार ८, २०७५
काठमाडौँ । सन् २०१८ को विश्वकपको ज्वरोले यतिबेला विश्वकपको सबै कुनालाई छोएको छ । ३२ राष्ट्र रसियामा विश्व फुटबलको सर्वोच्च उपाधिका लागि भिडिरहेका छन् । समूह चरणको पहिलो राउण्डको खेलहरु सकिँदा प्रतियोगिता रोमाञ्चक रुपमा अघि बढिरहेको छ । हेभिवेट भनिएका केही टोल...
पानामा पेपर : मेस्सीको झुटको पर्दा खुल्यो access_timeअसार ७, २०७५
पानामा पेपर्सले अफसोर वित्तिय प्रणालीलाई हल्लाएको दुई वर्ष पछि कानुनी संस्था मोसाक फोन्सेकाका थप नयाँ काजगाजहरुले विश्वका धनीहरुले कर नतिर्नका लागि अफसोर फर्ममा पैसा लुकाउन गर्ने अभ्यासबारे थप नयाँ जानकारीहरु बाहिर आएका छन् । यसमा अर्जेन्टिनी खेलाडी लियोनेल मेस्स...
मेस्सीलाई भेट्न ईरानदेखि रसियासम्म साइकलमै access_timeअसार ७, २०७५
क्लिफिन फ्रान्सिस्लाई एक साथीले यो पालि विश्वकपमा जान्छौँ भनेर सोध्दा उनी दक्षिण भारतको आफ्नो घरमा बसिरहेका थिए । “निश्चिय नै”, उनले उत्तर दिए । “म पनि भव्य प्रतियोगिता हेर्नका लागि रसिया जान सक्छु ।” त्यो अगस्टको कुरा हो– तर त्यो बेल...
रेकर्ड ब्रेकर : रोनाल्डोले अझै तोड्न सक्ने १० किर्तिमान access_timeअसार ६, २०७५
एजेन्सी । सन् २०१८ को विश्वकपमा स्पेनविरुद्धको खेलमा ह्याट्रिक गरेका पोर्चुगलका स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डो रेकर्ड ब्रेकर खेलाडी मानिन्छन् । आफ्नो खेल करियरको अन्त्यतिर रहेका रोनाल्डोले अझै थुप्रै किर्तिमानहरु तोड्न सक्ने सम्भावना छ । यहाँ त्यस्ता १० किर्तिमानहर...
विश्वकपमा खेल सकिएपछि रङ्गशाला सफा गरेर जापानका फ्यानले जिते संसारको मन access_timeअसार ६, २०७५
बीबीसी-विश्वकपमा प्रतिस्पर्धात्मक खेल पछि धेरै जसो अवस्थामा रङ्गशालाको स्टाण्ड उग्रेको खाना, कप र ¥यापरहरु फालिएको अवस्थामा पाइन्छ । निश्चित रुपमा मंगलबार राति जापानी फुटबल समर्थकहरुका लागि ठूलो उत्सबको अबसर थियो । तिनको टीमले ओपनिङ्ग खेलमा कोलम्बियालाई...
डि गेया : युनाइटेडमा ‘हिट’, स्पेनका लागि ‘फ्लप’ ? access_timeअसार ६, २०७५
एजेन्सी । ‘बिरलै’ गरिने भनिने गल्ती कति पटक गरे पछि ‘बिरलै’ शब्द असान्दर्भिक हुन्छ ? म्यानचेस्टर युनाइटेडको जर्सीमा डेभिड डि गेयालाई स्थिर खालको प्रदर्शनको लागि उदाहरण मानिन्छ । तर उनले आफ्नो राष्ट्र लागि भने उस्तै खेल प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् ।...
के मेक्सिकन फ्यानहरुले मनाएको उत्सवले साँच्चै भूकम्प निम्त्याएको थियो ? access_timeअसार ५, २०७५
एजेन्सी । विश्वकपको आफ्नो शुरुवाती खेलमा मेक्सिकोका हिरभिङ्ग लोजानोले जर्मनविरुद्ध गोल गरेपछि मेक्सिकन फुटबल फ्यानहरुले खुसी रोक्न सकेनन् । खेलको ३५ औँ मिनेटमा लोजानोले हानेको बलले नेट छाएपछि टिमका प्रशंसकहरुहरु खुसीमा उफ्रिए । तर, के केही मिडियाहरुले भ...
पेलेका चार नाम र त्यसको रोचक कथा access_timeअसार ५, २०७५
बीबीसी । विश्वकप फुटबल इतिहासको सबैभन्दा सफल टीम ब्राजिल हो । पाँच पटक विश्व विजेता रहेको ब्राजिलको यो सफलतामा सबैभन्दा बढी योगदान कसैको रहेको छ भने ऊ पेले हो । पेलेलाई फुटबलको जादुगर भनिन्छ । उनको आफ्नो जादुको प्रभावले देशलाई दिलाएको सफलता आजसम्म कसैले बराबर...
इटालियन कम्पनीमा यसरी तयार गरिन्छ विश्वकप ट्रफी र गोल्ड मेडल (तस्विरसहित) access_timeअसार ४, २०७५
एजेन्सी । रसियामा भइरहेको फुटबल विश्वकपमा यो पटक इटाली सहभागी हुन सकेन । ६० वर्षमा पहिलो पटक इटाली विश्वकपमा सहभागी हुनबाट बञ्चित भएको हो । तथापि केही इटालीका रेफ्रीहरुको अतिरिक्त रसियामा भइरहेको विश्वकपमा इटालीको अर्को एक चिजले पनि सहभागीता जनाउनेछ &n...
विश्वकप : मैदानभन्दा सामाजिक सञ्जालमा चर्को भीडन्त ! access_timeअसार ४, २०७५
‘हिँड्ने मान्छे लड्छ,’ पत्रकार सुशील पौडेल भन्छन्, ‘लियोनल मेस्सी लडेका हुन् । गन्तव्य हराएको होइन ।’ पत्रकार सइन्द्र राईको भनाइ छ, ‘मेस्सी इतिहास हुन् । उनलाई सम्मान छ ।’ नेपालले विश्वकप फुटबल नखेलुन्जेल अर्जेन्टिना छाडिन्न । पत्रक...